Rehefa Mihaona Amin-dry Trumps i Abe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2016 7:14 GMT
Nozarazaraina be tamin'ny media sosialy ito sarin'ny fihaonan'ny Praiminisitra Japoney Abe sy ny Filoha Amerikana Voafidy Trump ito. Fihaonana tamin'ny 17 Novambra, izay nozarain'ny Biraon'ny Kabinetran'ny Fifandraisana Japoney. Mipetraka eny amin'ny farany havian'ny sary i Mike Flynn, ary Ivanka Trump etsy amin'ny farany havanana.
Ny 17 Novambra, ny Praiminisitra Japoney Abe Shinzo no lasa mpitarika eto an-tany voalohany nihaona mivantana tamin'i Donald Trump, Filoha Amerikana voafidy, tao amin'ny TilikamboTrump ao New York. Nanamarika ireo mpaneho hevitra maro fa, amin'ny ampahany, noho ny filàna miresaka ireo fitarainana maro nataon'i Trump mikasika an'i Japana nandritra ny fampielezankevitra no antony hihazakazahan'i Abe hihaona amin'ny Filoha voafidy. Any Japana, manontany ny votoatin'ny resaka ireo mpaneho hevitra, ary indrindra hoe nahoana ireo mpikambana amin'ny fianakavian'i Trump no navela hipetraka hanatrika ny fihaonana eo amin'ireo loham-panjakana roa.
Fanehoankevitry ny Praiminisitra Abe taorian'ny fihaonana niaraka tamin'ny Mr Donald Trump, Filoha voafidin'i Etazonian'i Amerika
Tamin'ny voalohany, zara raha nisy hay ny mikasika ilay fihaonana nokarakaraina maimaika teo amin'i Abe sy Trump. Taorian'ilay fihaonana naharitra sivifolo minitra, niankina tamin'ireo sary sy fanambaràna nataon'i Abe navoakan'ny Biraon'ny Kabinetra Japoney ny tatitry ny vaovao mba hilazàna ny zavatra noresahana sy hoe iza no nanatrika.
Mitatitra ihany koa ny media Amerikana fa ny Praiminisitra Abe no fihaonana voalohany taminà filoham-panjakàna vahiny niarahan'i Trump Filoha voafidy. — Nikkei LIVE
Nilaza izao ny Praiminisitra Abe tao amin'ny fanambaràny:
Tsy afaka mamaly ireo fanontaniana mikasika ny andinindinin'ny fihaonana aho. Amin'ny lafiny rehetra, tsy handeha tsy misy fifampitokisana mihitsy ny fiarahanay. Tonga avy any lavitra aho resy lahatra fa mpitantana azo itokiana ny Filoha voafidy Trump.
Natao tao amin'ny trano manokan'i Trump tany Manhatten ilay fihaonana ny 17 Novambra, ary nahitàna karazan'olona, isan'izany i Ivanka zanaka vavin'i Trump sy Jared Kushner vadiny, ary i Mike Flynn, izay niasa ho talen'ny Sampam-Pitsikilovana izay mety ho tendrena ho mpanolotsaina vaovao momba ny fiarovam-pirenenan'i Etazonia ao amin'ny kabinetra savaranonandon'i Trump ny ampitson'ilay fihaonana.
Abe miaraka amin'ny mpandika teny, Jared Kushner, Ivanka Trump, Mike Flynn. Sary avy tamin'ny .Vohikalan'ny Biraon'ny Kabinetra Japoney.
Saropady ho an'i Japana ny Fananany Fifandraisana Tsara Amin'ny Fitantanana “Mampididozan'i” Trump
Hita ho am-pirahalahiana ilay fihaonana, ary notaterina fa nanome fitaovana fanaovana golf vita avy any Japana mitentina 5.000 dolara ho an'i Trump ny Praiminisitra Abe. Araka ny fijerin'i Japana, tena tsy maintsy fahombiazana iny fihaonana iny. Milaza ny mpitoraka bilaogy, mpanomana PhD sady mpaneho hevitry momba an'i Japana, Robert Fahey, fa “mampididoza” ho an'i Japana ny fiadidian'i Trump, ary manamarika hoe:
Efa rahona mazava amin'io fiarahana io ireo fotokevitra nambaran'i Donald Trump amin'ny politikany ivelany. Manao an'i Japana ho toy ny tsy mpiara-miasa fa toy ny mpifaninana manerantany amin'i Amerika, ireo fanambaràn'i Trump tao anatin'ny fampielezankeviny. Miahiahy an'i Japana ho manodikodim-bola izy ary tsy ahitàn'i Amerika tombony […] [Trump] ihany koa dia namerimberina nitsikera foana ny hitany ho Amerika tratran'ny tsy fahafahana mihetsika amin'ireo fifanarahany mikasika ny fiarovana miaraka amin'i Japana, ary lasa lavitra nihoatra ny establishment (fianakaviana migahana ara-politika) Amerikàna – izay nanosika foana an'i Japana handray anjara mavitrika kokoa amin'ireo fifandirana sy ezaka fitandroana ny filaminana – amin'ny fandrosoana hevitra hoe tokony hanana ireo fitaovam-piadiana nokleariny i Japana mba hiarovany tena.
Nanaraka ny fikapohan'i Trump an'i Japana nandritra ny fifidianana tao Etazonia, nandroso hevitra ny mpaneho hevitra sady solombavam-bahoaka Japoney fahiny, Tobias Harris, hoe toy ny nanandrana nandresy lahatra an'i Japana ihany koa ny Praiminisitra Abe hoe hitohy hatrany ilay fifandraisana manokana niaraka tamin'i Etazonia:
Rehefa miteny i Abe hoe afaka matoky an'i Trump izy, manandrana manome toky ireo vahoaka Japoney izy, izay ny ankamaroany mahita ny fandresen'i Trump ho ratsy & ratsy ho an'ny fifandraisan'ny Amerika-Japana.
Tsy very tamin'ireo Japoney sasany mpisera amin'ny Aterineto anefa hoe, raha amin'ny firesaky ny vatana no jerena, hita ho manana fifandraisana tsaratsara kokoa amin'i Trump i Abe noho ny miaraka amin'ny Filoha Shinoa Xi Jingping:
Abe + Trump = *endrika mitsiky*
Abe + Xi = *mototra*
Mampihomehy ahy ny fahasamihafàna tanteraka eto, lol.
Ahiahy ao Japana Mikasika ny Fihazakazahan'i Abe Hihaona amin'i Trump
Tsy ireo olona rehetra any Japana no nilamin-tsaina tamin'ny fihaonan'i Abe tamin'i Trump. Manamarika toy izao ilay mpanoratra malaza sy mpikatroka mafana fo, Shiba Rei, raha nanoratra tao amin'ny Yahoo! Japan News, fa na iray amin'ireo mpitarika maneran-tany sy ireo manan-danja voalohany niresaka tamin'i Trump aza ny Praiminisitra Abe Shinzo ny 9 Novambra taorian'ny fandreseny, toy izany ihany koa ny an'i Marine La Pen, mpitantana ny elatra havanana ao Frantsa :
Tokony vakiana: Abe, henatra manana ny laharana iraisampirenena taorian'ny fihaonany tamin'i Trump. ― Mitatitra ny valiny tena mifanohitra tanteraka nataon'i Abe tamin'i Trump raha oharina amin'ny an'i Angela Merkel-n'i Alemaina, i Shiba Rei.
Nanoratra ihany koa i Rei hoe raha niantso an'i Trump ho “mendrika itokisana” i Abe, Ny “Chancelière” Angela Merkel kosa nilaza fiahiahiana ankolaka mikasika ny firotsahan'i Trump amin'ireo fotokevitry ny demokrasia liberaly.
Nitsikera an'i Abe ihany koa ilay Japoney mpitarika ny mpanohitra, Renho Murata, nitaraina hoe tsy noborahana ny andinindinin'izay noresahana tamin'ilay fihaonana. Nitatitra ny Sankei News hoe nanontany i Renho raha tafiditra tao amin'ny resadresaka nifanaovan'i Abe sy Trump ireo resaka startejika toy ny “Trans-Pacific Partnership” (Fifanarahana Varotra Malalaka miampita ny Pasifika) sy ny ho avin'ireo toby Amerikana any Japana:
“Tonga avy any lavitra aho resy lahatra fa mpitantana azo itokiana ny Filoha voafidy Trump.” (Fihaonan'i Abe sy Trump)
Manontany i Renho , filohan'ny Antoko Demokraty (Japana), hoe “Mifototra amin'ny inona ny hitokisanao an'i Trump? Manana adidy ny hanazava ny antony ianao.”
Ho an'ireo Japoney hafa mpanaramaso, ny fanontaniana lehibe indrindra angamba dia mety hoe nahoana i IvankaTrump no nanatrika ny fihaonana teo amin'i Abe sy Trump. Tsy manana andraikitra mazava amin'ny governemanta Amerikana ny zanaka vavin'i Trump, ary miomana ny handray an-tànana ny fandraharahan'ny rainy.
Nanontany i Sankei Biz:
Nahoana i Ivanka Trump no nipetraka tamin'ny fihaonana teo amin'i Trump-Abe? Niavaka be ny fisiany.
Ny ampitson'io, nanana fotoana nahafahany nitondra fanazavana an'io ny gazety Amerikana:
Ahoana ny ahazoan'ireo Trumps vola? Mahatsiaro ho voatery mijanona ao amin'ny hotely Trump DC ireo delegasiôna avy any ivelany, avy tamin'ny @OConnellPostbiz @marycjordan